MogokAds - Online Advertising Network in Myanmar: Publisher Terms and Policies
မိုးကုတ်ကြော်ငြာ (MogokAds) ကိုထည့်သွင်းချင်သည့် website ပိုင်ရှင်များ လိုက်နာရမည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် သတ်မှတ်ချက်များ
➤ Please do not invite your site visitors to click on the ads in any way. This is will result in your account being suspended and earnings will be annulled.
အလွန်အရေးကြီးသည် - သင့်ဆိုဒ်တွင် ကြော်ငြာများအား အကူအညီတောင်းပြီး (သို့) အခြား အကြောင်းအရာ တစ်စုံတစ်ခု ပြပြီး (သို့) အတင်း click လုပ်ခိုင်းခြင်းများ လုံးဝ မလုပ်ပါနှင့်။ တွေ့ရှိပါက အကောင့် ပိတ်ခံရခြင်း၊ ဝင်ထားသော ပိုက်ဆံများကို ပေးရန် ငြင်းဆိုခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
➤ Don't click on your own MogokAds ads.
သင့်ရဲ့ မိုးကုတ်အက်ကို လုံးဝ click မလုပ်ပါနှင့်။
➤ Don't ask anyone to click on your MogokAds ads.
Encouraging users to click on your MogokAds ads is strictly prohibited -- whether directly or indirectly, on your own site, on third-party sites, or via email. Users should always click on MogokAds ads because they're interested in the services being advertised, not to raise money for your site or foracause, or to generate some sort of reward for themselves.
မည်သူ့ကိုမှ သင်ရဲ့ မိုးကုတ်အက် ကို click မလုပ်ခိုင်းပါနဲ့။
အသုံးပြုသူများအား သင်ရဲ့ မိုးကုတ်အက် ကြော်ငြာများကို click လုပ်အောင် တနည်းနည်းဖြင့် သင့်ဆိုဒ်တွင် (သို့) အခြားဆိုဒ်တွင် (သို့) အီးမေးလ်ဖြင့် တိုက်ရိုက်သော်၎င်း၊ သွယ်ဝိုက်ပြီးသော်၎င်း တိုက်တွန်းခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်း လုံးဝ မလုပ်ရပါ။ ကြောငြာများကို click လုပ်သူများသည် ကြော်ငြာရှင်များ၏ ဝန်ဆောင်မှု (သို့) ကုန်စည်များကို အမှန်တကယ် စိတ်ဝင်စားလျှင်သာ click လုပ်ရမည်။ သင့်ဆိုဒ်အတွက် (သို့) ရည်ရွက်ချက်တစ်ခုခုအတွက်၊ ဒါမှမဟုတ် လာရောက်လည်ပတ်သော သူတို့ရဲ့ အကျိုးခံစားခွင့် တစ်ခုအတွက် မဖြစ်စေရပါ။
➤ Choose the location for your ads carefully.
ကြော်ငြာထည့်မည့် နေရာကို သေချာစွာ ရွေးချယ်ပါ
သင့်အနေဖြင့် မတော်တဆ ကြော်ငြာများကို click ဖြစ်စေရန်အတွက် မသမာသော နည်းလမ်းများ (သို့) လုပ်ဆောင်မှုများကို ဘယ်တော့မှ မလုပ်ပါနှင့်။ ကြော်ငြာများကို လုပ်ရှားနေသည့် အရာများ၊ သို့ အခြား page ပေါ်တွင်ရှိသော အရာများနှင့် ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်စေသည့် နေရာများနှင့် မသင့်လျှော်သော (သို့) အထင်မှားစေနိုင်သော ခေါင်းစဉ်များအောက်ထင် ထားရှိခြင်းမှ ရှောင်ကျင်ပြီး လွတ်လပ်သောနေရာကို ရွေးခြယ်ပြီး ထားပါ။
➤ When you changed your web domain, or want to show our ads in another website, please let us know. Otherwise, you may not get paid for not registered sites.
လျှောက်ထားစဉ်က domain မှ အသစ် ပြောင်းသွားလျှင် သို့ အခြား domain များတွင် ကြော်ငြာထည့်သွင်းလိုပါက ကျွန်တော်တို့ကို ဆက်သွယ် အကြောင်းကြားပါ။ မဟုတ်ပါက အကြောင်းအကြားထားသည့် ဆိုဒ်များအတွက် ငွေရချင်မှ ရပါလိမ့်မည်။
➤ Do not place MogokAds on the pages with no or few content.
မိုးကုတ်အက်ကို သတင်း (သို့) ဆောင်းပါး (သို့) အချက်အလက်များ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ မပါရှိသည့် စာရွက်များတွင် မထည့်ရပါ။
➤ MogokAd script can be installed on website with other ad providers.
မိုးကုတ်အက်ကို အခြား ကြော်ငြာများနှင့် တစ်မျက်နှာတည်းတွင် ထည့်သွင်းခွင့်ပြုသည်။
➤ We are net 45, meaning the payment will be made on 45 after the month end. The minimum payment threshold is 20,000 MMK.
ပိုက်ဆံထုတ်ရန်အတွက် အနည်းဆုံး ၂ သောင်းဝင်ပြီးမှသာလျှင် မိုးကုတ်အက် ရုံးခန်း (သို့) သင့် မြန်မာပြည် ဘဏ်အကောင့်ထဲသို့ ပိုက်ဆံလွှဲပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လကုန်ပြီး ၄၅ ရက်ကြာမှာသာလျှင် ငွေချေမှာဖြစ်ပါတယ်။